Nhau - Zviuru zveruzivo rwekudhinda! Zvakawanda sei zvaunoziva iwe?
Chero bedzi iyo R + G + B matatu mavara akasangana zvakaenzana, anopfuura makumi emamirioni emavara anogona kugadzirwa. Nei nhema? Nhema dzinogona kugadzirwa kana iro reshiyo kuRGB yakaenzana, asi zvinotora inki nhatu kuti dzigadzire rimwe vara, risingakwanisike kubva mune yehupfumi maonero. Muchokwadi, dema rinoshandiswa zvakanyanya mukugadzira dhizaini, ndosaka iko kudhinda kwemavara mana kuchishandiswa. Pane imwezve poindi: kana dema rakaburitswa neRGB richifananidzwa nechitema chakasanganiswa zvakananga neingi, iyo yekutanga ine pfungwa isina maturo, nepo yekupedzisira ichinzwa kuremerwa.
1. Nechechina-mavara musimboti, zviri nyore kwazvo kuti munhu wese agamuchire. Izvo zvakaenzana nemana mafirimu panguva yekubuda, uye zvakare yakaenzana nemana chana e cyan, magenta, yero, uye nhema (C, M, Y, K) mune migero muPhotosHOP. Iko kuchinjiswa kweiyo chiteshi kana isu tichigadzirisa mufananidzo iko chaiko shanduko kune iyo firimu.
2. Meshes, machira nemakona, mambure akapfava uye mambure akaturika. Meshi: pa square inch, huwandu hwemadheti akaiswa, 175 mesh yezvinhu zvakajairika zvakadhindwa, uye 60 mesh kusvika 100 mesh yepepanhau, zvinoenderana nemhando yepepa. Kudhinda kwakakosha kune meshes yakakosha, zvinoenderana nehunhu.
1. Mamiriro uye kurongeka kwemufananidzo
Kudhinda kwazvino uno kunoshandisa kudhinda kweoffset (mana-mavara kuprinta), kureva kuti, mufananidzo wemuvara wakakamurwa kuita mavara mana: cyan (C), chigadzirwa (M), yero (Y), dema (B) mana-mavara dot firimu, wobva wadhinda Iyo PS ndiro inodhindwa kanokwana nemuchina weoffset, uyezve icho chiri chigadzirwa chakadhindwa chigadzirwa.
Kudhinda mifananidzo kwakasiyana neyakajairwa komputa kuratidza mifananidzo. Mifananidzo yacho inofanirwa kunge iri muCMYK modhi panzvimbo yeRGB modhi kana dzimwe nzira. Pakuburitsa, iyo pikicha inoshandurwa kuita madhi, inova iyo chaiyo: dpi. Yechokwadi dzidziso yechokwadi yemifananidzo yekudhinda inofanirwa kusvika 300dpi / pixel / inch, uye mifananidzo yakanakisa iyo yaunowanzoona pakombuta kazhinji inonzwa yakanaka kwazvo pane yekutarisa. Muchokwadi, mazhinji acho ari 72dpi RGB modhi mifananidzo, uye mazhinji acho haakwanise kushandiswa kudhinda. Mifananidzo yakashandiswa haifanire kuratidzwa seyakajairwa. Usafunge kuti iyo mifananidzo inogona kushandiswa kudhinda nekuti inonakidza kuburikidza neacdsee kana imwe software, uye inoyevedza mushure mekukudza. Ivo vanofanirwa kuvhurwa muphotohop, uye saizi yemufananidzo inoshandiswa kuratidza chokwadi. Akarurama. Semuenzaniso: pikicha ine resolution ye600 * 600dpi / pixel / inch, ipapo saizi yazvino inogona kukwidziridzwa kudarika zvakapetwa kaviri uye kushandiswa pasina dambudziko. Kana iyo resolution iri 300 * 300dpi, saka inogona kungodzikiswa kana saizi yepakutanga haigone kuwedzerwa. Kana iyo resolution yemufananidzo iri 72 * 72dpi / pixel / inch, saka saizi yayo inofanirwa kudzikiswa (iyo dpi kurongeka ichave yakati kurei), kudzamara chisarudzo chave 300 * 300dpi, inogona kushandiswa. (Paunenge uchishandisa basa iri, isa chinhu "Tsanangudza zvakare Pixel" mune sarudzo yemufananidzo mu Photoshop kune hapana.)
Mafomu akafanana emifananidzo ndeaya: TIF, JPG, PCD, PSD, PCX, EPS, GIF, BMP, nezvimwewo.
2. Ruvara rwemufananidzo
Nezve mamwe mazwi ehunyanzvi senge kupamhidzira, kudhinda, kuburitsa, uye ruvara rwemavara mukudhinda, unogona kutarisa kune zvimwe zvine chekuita nekudhinda. Hedzino dzimwe pfungwa dzakajairika dzinofanirwa kutariswa.
1, mhango kunze
Pane mutsetse wemavara ebhuruu wakatsimbirirwa pane yeyero yepasi ndiro, saka pane yeyero ndiro yefirimu, chinzvimbo chemavara ebhuruu chinofanira kunge chisina chinhu. Izvo zvinopesana ndezvechokwadiwo kune vhezheni yebhuruu, zvikasadaro chinhu chebhuruu chinodhindwa chakanangana neyero, ruvara ruchachinja, uye iyo yekutanga yebhuruu hunhu ichave yakasvibira.
Pane mutsetse wevatema mavara akasvinwa pane imwe tsvuku ndiro, ipapo chinzvimbo chevatema vatema pane tsvuku ndiro yemufirimu haifanire kuburitswa kunze. Nekuti dema rinogona kubatisisa chero chero ruvara, kana izvo nhema zvitema zvaburitswa kunze, kunyanya zvimwe zvidiki zvinyorwa, kukanganisa kudiki mukudhinda kuchaita kuti chena kumucheto kuburitswe pachena, uye dema nemuchena musiyano wakakura, izvo zviri nyore kuona.
3. Mavara-mana matema
Iri zvakare dambudziko rakajairika. Usati waburitsa, unofanirwa kutarisa kuti iwo mavara matema ari mufaira rekubuditsa, kunyanya iwo madiki anodhinda, anongova mundiro nhema, uye haafanire kuoneka pane mamwe mahwendefa matatu-mavara. Kana zvikaonekwa, mhando yechigadzirwa chakadhindwa ichadzikiswa. Kana iyo RGB mifananidzo ikashandurwa kuita CMYK mifananidzo, iwo mavara matema anonyatso kuve mana-mavara matema. Kunze kwekunge zvataurwa zvimwe, inofanirwa kugadziriswa iyo firimu isati yaburitsa.
4. Mufananidzo wacho uri muRGB modhi
Kana uchiburitsa mifananidzo muRGB modhi, iyo RIP system inowanzo shandura ivo vova CMYK modhi yekubuda. Nekudaro, iyo mhando yemhando ichadzikiswa zvakanyanya, uye chigadzirwa chakadhindwa chichava nerakajeka ruvara, kwete kupenya, uye mhedzisiro yacho yakaipa kwazvo. Mufananidzo wacho unonyanya kushandurwa kuita CMYK modhi muphotohop. Kana chiri chinyorwa chakanyorwa, chinofanira kuenda kuburikidza nekugadziriswa kwemavara mufananidzo usati washandiswa.